လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားနှင့်နည်းပြများအတွက်လျှပ်စစ်လေအေးပေးစက်နှစ်ဆ Air Return စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ တေးရေး
ESD စီးရီးအသစ်စွမ်းအင်ဘတ်စ်ကားလေအေးပေးစက်သည်လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများအတွက် ၈ မီတာမှ ၁၂ မီတာအထိလျှောက်ထားရန်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်ခေါင်မိုးတပ်ထားသောလေအေးပေးစက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ESD စီးရီးများသည် Cloud control နည်းပညာ၊ မြင့်မားသောဗို့အားဆက်သွယ်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည့်နည်းပညာ၊ ခေါင်မိုးယူနစ်ဘက်ထရီအပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BTMS) နည်းပညာ၊ မော်တော်ယာဉ်အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ၊ DC750 မြင့်ဗို့အားကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာနည်းပညာအမျိုးမျိုးဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ဘတ်စ်ကားအတွင်းရှိလေထုသန့်စင်သည့်နည်းပညာနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာသောအလူမီနီယံအလွိုင်းတွန်းကားများ။
8-12m E- ဘတ်စ်ကားအတွက် ESD စီးရီး၊ လေထုနှစ်ဆပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်သည်
အသေးစိတ်အတွက် sales@shsongz.cn တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
SONGZ Intelligent Electric Modular Architecture (SIEMA) ဖွဲ့စည်းပုံ
လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှု၊ condenser နှင့် evaporator၊ ပေါင်းစပ်ထားသောအပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်စသည်တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောအပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်စသည်တို့ကိုသဘောပေါက်သည့်အသိဉာဏ်ရှိ modular ပလက်ဖောင်းဒီဇိုင်း (SONGZ SIEMA3 platform) ၇၂% အထိရောက်နိုင်တယ်။
လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား A / C ESD စီးရီး၏နည်းပညာအသေးစိတ်
စံပြ ESD-III-BNSD ESD-IV-BNSD ESD-V-BNSD ESD-VI-BNSD
စွမ်းရည်အေး စံ 16kW 18kW ၂၀KW 22kW
8.0 ~ 8.8 မီတာ 8.9 ~ 9.4 မီတာ 9.5 ~ 10.4 မီတာ 10.5 ~ 12 မီတာ
ချဲ့ Valve ဒန်ဖော့ ဒန်ဖော့ ဒန်ဖော့ ဒန်ဖော့
လေစီးကြောင်းပမာဏ (သုညဖိအား) လိုင်စင် (Fan အရေအတွက်) ၆၀၀၀ m3 / h (၃) ၈၀၀၀ m3 / h (၄) ၈၀၀၀ m3 / h (၄) ၁၀၀၀၀ m3 / h (၅)
ရေငွေ့ပျံ (Blower အရေအတွက်) ၄၀၀၀ m3 / h (၄) ၄၀၀၀ m3 / h (၄) 5400 m3 / h (6) ၆၀၀၀ m3 / h (၆)
ခေါင်မိုးယူနစ် အတိုင်းအတာ 2670 * 2000 * 278mm 3170 * 2000 * 278mm 3170 * 2000 * 278mm 3170 * 2000 * 278mm
အလေးချိန် ၂၄၄ ကီလိုဂရမ် ၂၆၅ ကီလိုဂရမ် ၂၇၀ ကီလိုဂရမ် ၂၇၁ ကီလိုဂရမ်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု 6.7kW 7.5kW 8.4kW 9.2kW
ရေခဲသေတ္တာ အမျိုးအစား R407C R407C R407C R407C
ESD-III-BNSD နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ESD-V-BNSD နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ESD-VI-BNSD နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
၁။ လေအေးပေးစက်၏ input power voltage သည် DC250-DC750V နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပြီး control voltage သည် DC24V (DC20-DC28.8) ဖြစ်သည်။ ESD စီးရီးများသည် trolleybus အတွက်မသင့်တော်ပါ။
2. ရေခဲသေတ္တာ R407C ဖြစ်ပါတယ်။
3. ပန်ကာသည် DC motor ဖြစ်သည်။
အားသွင်းထွက်ပေါက်ရေအပူချိန်7ဖြစ်ပါတယ်℃-15℃, အထုတ်လွှင့်ထွက်ပေါက်ရေအပူချိန် 11 ဖြစ်ပါတယ်℃-20℃, Charging ≤ဆေးကြော 10Kw ≤1-3Kw, compressor သည် High Compressor ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
ESD စီးရီး E-Bus AC လုပ်ဆောင်ချက်များအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း （Optional）
၁။ အသိဉာဏ်ရှိ modular ပလက်ဖောင်းဒီဇိုင်း (SONGZ SIEMA3 ပလက်ဖောင်း) သည်မော်ဂျူရီယမ်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ မောင်းနှင်မှုစနစ်၊ ရေငွေ့ပျံခြင်း၊
2. ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်း၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအောက်ခြေအခွံဒီဇိုင်း၊ condenser ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချည်းနှီးသောဒီဇိုင်း၊ တွန်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခေါင်း၊ အလူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်ထားသောဖိအား ၃၀% ပေါ့ပါးသည်။
၃။ လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသည့်ခေါင်မိုး၏ဒီဇိုင်းမှာဆက်သွယ်မှုနည်းပါးသည်၊ တပ်ဆင်မှုနည်းသည်၊ သေးငယ်။ လှပသောအသွင်အပြင်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်လည်ပတ်မှု၏စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်လေ ၀ င်လေထွက်အမြင့်သည်ခရီးသည်တင်လေယာဉ်၏အပြည့်အ ၀ အသုံးပြုသည်။
၄။ အပေါ်ဆုံးတောင်သည်ထူးခြားသောဆူညံသံလျော့ချခြင်းနှင့်အလယ်အလတ်ဖြစ်သော shock absorption ၏ system integration design ကိုအသုံးပြုသည်။ ပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်ဤပလက်ဖောင်းသည်အနိမ့်ဆုံးဆူညံသံ၊ အကောင်းဆုံးစနစ်နှင့်အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအချိုးအစားရှိသည်။
၅။ ထုတ်ကုန်၏ EMC သည် GB / T 18655 level3၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောယုံကြည်စိတ်ချရသောလွတ်လပ်သောအသိဥာဏ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ခြင်းပုံစံကိုကျင့်သုံးသည်။
၆။ Compressor သည် DC ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း (အမြဲတမ်းသံလိုက်ထပ်တူပြုခြင်း) နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲသောကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ အဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များသည်အီလက်ထရောနစ်တိုးချဲ့သောအဆို့ရှင်များ၊ တိကျသောထိန်းချုပ်မှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊
လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုသည် All-in-one ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်အပြင်အဆင်၏နေရာကိုထိရောက်စွာလျှော့ချပေးပြီးဝါယာကြိုးကြိုးဒီဇိုင်းသည်လှပသည်။
၈။ ပေါင်းစပ်ထားသောဘက်ထရီအပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည်သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ 3-10kw ဘက်ထရီကိုအအေးပေးသည့်အပြင်ထုတ်ကုန်၏အအေးသက်ရောက်မှုကိုမထိခိုက်စေပါ။
၉။ လေထုသန့်စင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် ၄ ခုပါ ၀ င်သည်။ ပိုးမွှားများဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ထိရောက်သောဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုကိုထိရောက်စွာတားဆီးရန်၊ လျှပ်စစ်သန့်ရှင်းသောဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်း၊
၁၀။ Cloud စနစ်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ရောဂါရှာဖွေခြင်းကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကြီးမားသော data application များမှတဆင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းစွမ်းရည်များကိုတိုးတက်စေခြင်း။
၁၁။ PTC လျှပ်စစ်အပူသည်မတူညီသောဖွဲ့စည်းမှုများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အရ PTC ကိုအချိန်မှန်စတင်ပါ၊ အပူပေးသည်နှင့်အပူချိန်ပြည့်အကွာအဝေးတွင်အပူကိုနားလည်စေသည်။
လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား A / C